‘रवि लामिछाने’काे गुनगाण मात्र गाउनु सिर्फ भेडापन हाे ! भिडियो सहित !! अाफु केही नगर्ने,अनि फेषबुकमा हल्ला गरेर अाफ्नाे जिम्मेवारी पूरा हुदैंन। - Enepalese.com
‘रवि लामिछाने’काे गुनगाण मात्र गाउनु सिर्फ भेडापन हाे ! भिडियो सहित !! अाफु केही नगर्ने,अनि फेषबुकमा हल्ला गरेर अाफ्नाे जिम्मेवारी पूरा हुदैंन।
इनेप्लिज २०७४ मंसिर १६ गते १६:३५ मा प्रकाशित